Trump oo cambaareeyay ‘weerarka’ kiimikada loo adeegsaday ee Suuriya | Baydhabo Online
Trump oo cambaareeyay ‘weerarka’ kiimikada loo adeegsaday ee Suuriya
Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa cambaareeyay dadka shacabka ah ee lagu laayay waqooyiga Suuriya kuwaas oo ay u muuqato in lagu weeraray hub kiimiko ah oo ay gaysteen diyaaradaha dagaalka ee Suuriya.
Arrintaasi waxay “waxyeelo ku tahay ban-adamnimada” ayuu yiri Trump, wuxuuna intaas ku daray in “marka aad disho carruur aan waxba galabsanin, dhallaan aan dhib gaysanin iyo ilmo yaryar in markaas laga talaabay xariijimo badan.
Trump ma uusan soo hadal qaadin Ruushka oo ah rafiiqa Suuriya kaas oo sheegay in laga yaabo in ay dhibaaatadan ka dhalatay kiimikooyin ku jiray gacmaha jabhadaha.
Laakiin danjiraha Maraykanka u qaabilsan Qaramada Midoobay ayaa Ruushka ku eedaysay in uu dadayo dawladda Suuriya.
Aragtida Ruushka ee weerarkan
Dawladda Ruushka ayaa sheegtay in weerarkii ‘kiimikada’ loo adeegsaday ee dilay dadka badan ee shacabka ah kuwo kale oo badanna dhaawacay uu ka dhacay magaalo ay mucaaradku haystaan in uu sababay hub laga riday dhulka ay maamulaan jabhaduhu.
Wasaaradda difaaca ayaase qirtay in diyaaradaha dagaaalka ee Suuriya ay weerar ka gaysteen magaalada Khan Sheikhoun oo ka tirsan gobolka Idlib.
Laakiin waxay sheegtay in diyaaradahu ay weerareen kayd lagu sameeyo miinooyin walxo sun ah laga buuxiyay oo la rabay in lagu isticmaalo Ciraaq.
Laakiin Maraykanka iyo qolyo kale ayaa sheegay in diyaaradaha Suuriya ay soo rideen hub kiimiko ah, laakiin dawladda Suuriya ayaa diiday eedaymahaas. Wasiirka arrimaha dibadda ee UK Boris Johnson ayaa warka Ruushka kaga jawaabay in “dhamaan cadaymaha uu arkay ay tilmaamayaan in xukuumadd madaxweyne Bashaar al Asad ay ka dambaysay weerarkaas, ayna hub sharci darro ah u isticmaalayso dadkeeda.”
Magaalo Suuriya oo ‘lagu weeraray chlorine gaas’
Ruushka oo laga codsaday xabbad joojin gudaha Xalab
Dowladda Suuriya oo lagu eedeeyay isticmaalka sun halis ah
Koox xuquuqda aadanaha ee Suuriya u dhaqdhaqaaqda oo fadhigoodu yahay Britain ayaa dhimashada Khan Sheikhoun ku sheegay 72 ruux oo ay ka mid yihiin 20 carruur ah
Muuqaal laga duubay goobta uu weerarkaas ka dhacay ayaa muujinaya dad shacab ah oo neeftu ku dhagantahay, dad goob joogeyaal ahna waxay sheegeen in markii dambana la duqeeyay rugihii caafimaad ee lagu dabiibayay dadka dhaawaca ah.
Qaar ka mid ah dadka waxaa lagu daweeyay xadka dalka Turkiga, haweenay isbitaal ku jirtana waxay sheegtay in suntu ay saamaysay, ayna ku adkaatay in ay taagnaato ayna wareertay iyada oo xannuun dareemaysa, ayna ku adkaatay in ay neefsato.